नेपालमा थप १३२५ जनामा कोरोना संक्रमण Canada Nepal
नेपालमा थप १३२५ जनामा कोरोना संक्रमण
क्यानाडानेपाल डेस्क आश्विन ४ २०७७
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर एक हजार तिन सय २५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।
आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार तिन सय २५ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६४ हजार एक सय २२ पुगेको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए । साथै ४६ हजार २ सय ३३ जनाले कोरोनालाई जितेका छन् ।
आश्विन ४, २०७७ आइतवार २२:०८:२८ बजे : प्रकाशित